အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါး ပမာ ၀ိပဿနာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါး ပမာ ၀ိပဿနာ…
အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါး ပမာ ၀ိပဿနာ…
Posted by Ko out of... on Jun 18, 2012 in Creative Writing | 29 comments
– မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော် အသက် (၂၅)နှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တုံးက …
ခဏခဏဖျားနာတော့ … ကိုယ်နေတာကလည်းရွှာ ဆိုခါကျတော့ ဆေးဝါးလည်းကောင်းကောင်း မရှိ၊ ဆရာလည်း
ကောင်းကောင်းမရှိဆိုတော့ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့လူ၊ အတွေ့
အကြုံရှိတဲ့လူတွေရဲ့ စကားတော့ ပိုမှန်မယ် ပိုနှီးစပ်မယ် ထင်လို့
သူတို့ဆီက အကြံအဥာဏ် ကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်…
ကျွန်တော့်ကို သူတို့က ဘာဆေး ညွှန်းလည်းဆိုတော့..
အနာဂျက်ဆင် ဆေးသောက်လိုက် ပျောက်သွားမယ်ဆိုပြီး
ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း သောက်ရော ရောဂါက သိပ်မကြာခင် ပျောက်သွား တယ်ဗျာ..
ကိုယ်လည်းဒီဆေး နာမည်ကို မှတ်ထားပြီး နောက်ဖျားနာ ကိုက်ခဲ
တာနဲ့ ဒီဆေးကို ဘဲစွဲသောက်တယ်..
ကိုယ့်လိုဘဲ … ဖျားနာတဲ့ လူတွေ တွေ့ရင်လည်း ဒီဆေးကို သောက်ဖို့ သတင်း ထပ်ပေးတယ်ဗျာ…
– နောက်တော့ အသက်လည်း နည်းနည်းကြီး မြို့ကို ကိစ္စတခုနဲ့ သွားတော့ အဲဒီမြို့မှာဘဲ ဖျားပါလေရော…
အဲဒီအခါ သူငယ်ချင်းက ဆေးခန်းခေါ်သွားတယ်..
ဆေးခန်းရောက်တော့ ဆရာဝန်က ရောဂါ အခြေအနေကိုမေးပြီး
ွှအရင်တုံးက ဘာဆေးတွေသောက်ခဲ့လဲ?… စသည်ဖြင့်မေးတော့
ကိုယ်ကလည်း အနာဂျက်ဆင်ဆေးကို စွဲသောက်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြ
ထိုအခါဆရာဝန်က ဒါဘယ်သူက ညွှန်းသလဲ..
နားမလည်ဘဲ ဘာဖြစ်လို့ ဒီဆေးကိုသောက်တုံး?…
ဒီဆေးကို သုံးစွဲတာများရင် သွေးဥဖြူ (white blood corporal) ပျက်စီးကုန်မယ်..ဒီသွေးဥဖြူ ပျက်စီးရင် လူကမကြာမကြာ ဖျားနာမယ်၊ ချူချာမယ်၊ သွေးဥဖြူကို
ဖျက်စီးတဲ့ အတွက် အထဲကနေ လူကို တစစီ ဖြည်းဖြည်းချင်း
သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ ဖဲ့ချွေနေတာ၊ ဖျက်းစီးနေတာ.. ဒါကိုမင်း မသိဘူး နောက်ဆို မသောက်တော့နဲ့ ဆိုပြီး ပြောတယ်..
အဲဒီဆရာဝန်က.. ဆေးရဲ့ဆိုးကြိုးကို အကြောင်းစုံ စိတ်ရှည်ရှည်းထားပြီး ရှင်းပြပေးတယ်…
တော်တော်ရိုးသားပြီး လူသားတွေရဲ့ အကျိုး၊ လူသားတွေရဲ့
အသက်ကို တန်ဖိုးထားပြီး အမှန်တကယ် သနားညာတာ
ထောက်ထားတတ် အကျိုးလိုလား စိတ်၊
မေတ္တာတရားနဲ့ တော်တော်ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာဝန်ပါလား
– အခုလည်း ပြောချင်တာက အမျှော်အကြောက် ကင်းကင်းနဲ့
အကျိုးလိုလားစိတ်နဲ့ ရိုးရိုးသားသားလေး တွေးမိထားတဲ့ မိမိရဲ့
အမြင်လေးကို ပြောပြကြည့်တာပါ…ငြင်းခုံဖို့ ၊ရန်ဖြစ်ဖို့ သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေ လိုတဲ့ စိတ်လုံးဝ မပါပါဘူး…
အနာဂျက်ဆင်ဆေး တီထွင်ပေးတဲ့ ဆေးဆရာကို ပျက်စီးစေလိုတဲ့
စော်ကားလိုတဲ့ စိတ်လုံးဝ မပါပါဘူး… လူကိုယ်ကောင်ကြီးအကြောင်းကို ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောပါဘူး…
(လူကိုဝေဖန်တာ မဟုတ် မူကိုဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်သည်)
အခုလည်း..ဆေးရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်အာနိသင် စသည့် အားနည်းချက် အားသာချက်ကို လက်တွေ့လောကဘ၀မှာ
အကျိုးတကယ် ရှိမရှိ အဖြေရှာကြည့်ခြင်း မျိုးသာဖြစ်သည်…
ပြောချင်တာ …ဆေးဝါးဟာ (side effect) နည်းလေ ကောင်း
လေဘဲ…နောက် (side effect) လုံးဝမရှိတာ အကောင်းဆုံးဘဲ
ဘုရားတရားဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး လုံးဝမရှိတဲ့ ဆေးဝါးပါ…
တရားဂုဏ်တော် (၆)ပါးဟာ ဘုရားဖေါ်တဲ့ ဆေးဝါးရဲ့ အရည် အချင်းဘဲ…
-ယခု ဒို့နိုင်ငံက တရားစခန်းတွေမှာ လေ့ကျင့် ပွါးများအားထုတ်
နေတဲ့ ၀ိပဿနာတရား တွေဟာ အနာဂျက်ဆင်ဆေးများ ဖြစ်နေ
ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ပြောရဲလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်
အဲဒီဆေးကို စွဲသောက်ခဲ့ ရဖူးလို့ပါဘဲ…
ဒါကမင်း တစ်ယောက်ဘဲဖြစ်တယ် တခြားလူက မင်းလို မဟုတ်ပါ
ဘူးလို့ပြောချင် ပြောမယ်…ဒါထားပါ..ဒါကျွန်တော်ပြော လိုရင်းမဟုတ်ပါဘူး…
အမြင်လေးကိုလွတ်လွတ် လပ်လပ် ပြောကြည့်တာပါ…
– ကနေ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီပွါးရေး အစစ အရာရာ ချွတ်ခြုံကြ ပြီး ဆင်းရဲနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့ အဲ့ဒီ ၀ိပဿနာ အနာဂျက်ဆင်ဆေး စွဲသောက်တဲ့နေ့က စပြီးဖြစ်တာလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်..
သူက လူကိုဘယ်လို ဖျက်စီးနေလို့ မင်းဒီလောက်တောင် မညာမတာ ပြောရတာလဲ?.. ဆိုရင်..ကျွန်တော် ဒီတရားကို အားထုတ်ခါစ သိပ်သဘောမပေါက်ခဲ့သေးပါဘူး..
ဒါပေမဲ့နောက် အကျင့် တခုက လူကိုလွမ်းမိုးလာတော့ တရားစခန်း
တွေမှာ အကြိမ်ရေ တော်တော်များများ အားထုတ်ရင်းနဲ့ တနေ့တော့…တရားစခန်း တခုမှာ…
လူကိုယ်ကောင်စပျောက်ပြီးနာမည်လည်းခေါ်လို့မရ၊ ယောင်္ကျားမိန်းမလည်း ခေါ်လို့မရ၊ ဘာမှ မရှိတဲ နေရာကို ရောက်သွား သလို လုံးရပ်သဏ္ဍာန်ပုံ ဟန်နိမိတ် မတွေ့ရတော့ ဘဲဖြစ်သွား တယ်..အချိန်တော်တော်ကြာကြာလည်း ဖြစ်သွားတယ်…
အချိန် နေရာဒေသလည်းပျောက်..”ပညတ်ပျောက်..ပရမတ်ရောက်ပရမတ်ပျောက်… နိဗာန်ရောက် ” လို့ကြားထားတော့
ဟာ..ဒီပျောက်နေတဲ့ နေရာက.. ဘာလဲ???..လူကြီးတွေ
ပြောပြောနေတဲ့ နိဗာန် ဆိုတာ ဘာမှ မရှိဘူးဆိုတာ ဒါဘဲထင်တယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားပြီး နောက်ဆုံးတော့
လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ဆရာထံ တရားလျှောက်တော့ ဒကာဟာ ပါရမီ ရင့်သန်လို့ အခုလိုမြင်ရတာ အဲဒီ အငြိမ်းဓါတ်ကို မကြာမကြာ ၀င်စားနော်..ဒါလွတ်မြောက်မှု ၀ိမုတ္တိရသဘဲ လို့ပြောတယ်…
ဒီဘ၀မှာတော့ အပါယ် ပိတ်ပြီ.. နောက်ဆက်အားထုတ်ရင် လုံးဝ ကိစ္စပြီးမယ် ..မပြီးသေးလည်း စိတ်ချရပြီဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေး လိုက်တယ်……
အဲဒီအချိန်ကနေစပြီး… နောက်ဘယ်လိုအခက်အခဲ ဒုက္ခရောက်ရောက် ကျွန်တော်လည်း ဒီပျောက်နေတဲ့ သုညကိုဘဲ
ကြည့်နေမိတော့တယ်..ဒါကျွန်တော် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းပါဘဲ…
မလုပ်ချင်တော့ဘဲ လူ့လောကမှာ နေပြီး လူတွေကို အပြစ်မြင်လာတယ်လူတွေနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတော့တယ်…
နောက်ဆုံး တောထွက် ချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်..ကိုယ်
ယောင်္ကျားမရှိ၊ မိန်းမမရှိ လောကမှာဘာမှမဟုတ်ပါဘူး..
နောက်ဆုံးတော့ ဓါတ်သဘော၊ပရမတ်သဘော ..နောက်ဆုံး
လုံးရပ်သဏ္ဍာန်ပုံ ဟန်နိမိတ်လည်း မတွေ့ရ၊ နာမည်လည်းခေါ်လို့ မရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာမှမသိတော့ ..
ဘာမှ မသိတော့ ဘာမှ မလိုချင်..ဘာမှ မလို
ချင်တော့ ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘဲ ကျွန်တော်ဟာ လူဖြစ်ပြီး လူ့တာဝန်
လည်းမကျေ၊ မိဘဆရာနှင့် ဇနီးမယား၊သားသမီး အပေါ်လည်း တာဝန် မကျေ အစစ အရာရာ ငါဟာ တန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူ…ဘာမှ အလုပ်မလုပ်ချင်တော့တဲ့လူ၊ အလုပ်လုပ်နေရတာရင်တောင်မှ ရည်ရွှယ်ချက် ပန်းတိုင်း မရှိတဲ့ လူ၊ အနာဂတ် ပျောက်နေတဲ့ လူ၊ ကိုယ်က မရှိတော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို အားကိုးချင်တဲ့
စိတ်လည်းမရှိ(အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော)ဆိုတဲ့ ဘုရားစကားနဲ့လည်း လွှဲချော် အော်..လောက ကြီးဟာ ဘာမှ
မဟုတ်ဘူး လို့အတွေးဝင်ပြီး ..အချိန်ပြည့် သုည
ဒါကြောင့် ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ …
သုညကို အချိန်ရရင် ရသလို ဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကို ဒီမှာဘဲ
ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်း၊ ပေးဆပ်ရင်းနဲ့ အခုလို အစစအရာရာဆင်းရဲနေရ
ပါကြောင်း..ဒါကြောင့်” အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါးပမာ ၀ိပဿာနာ”
ကို သောက်သင့် မသင့်ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ချင့်ချိန်ကြကာ
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲ တရားစခန်းတွေမှာ အားထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်…
မိဘ၊ ဆရာနဲ့ သားသမီး ဇနီးမယား၊ ဆွေမျိုးဥာတိတွေအပေါ်လဲ
ပိုပြီးတာဝန်သိတတ်လာတယ်။ ပို တာဝန် ကျေလာတယ်…။
ခြုံပြီးပြောရရင် ကျုပ်အဖို့တော့ ၀ိပဿနာအားထုတ်ပြီးမှ လူ့တန်ဘိုးပိုတက်လာတယ်..။
(ကြည့်ရတာ ခင်ဗျားသောက်တဲ့ အနာဂျက်ဆင်က ချိုင်းနားကလာတာလားမသိ… )
စိတ်ကြည်လင်လာတာမဟုတ်ပါ – – – – စိတ်ထုံတုံတုံ ဖြစ်သွားတာပါ။
ဥာဏ်ပိုကောင်းလာတာမဟုတ်ပါ – – – – ဘာမှ မတွေးချင်တော့လို့ ဘာမှ မသိလာတော့တာပါ။
လူမှု့ရေးကိစ္စတွေမှာ ပိုအဆင်ပြေလာတာမဟုတ်ပါ – – – – –
လူတွေက ပိုရှောင်ရှောင်လာတာပါ။ (သူက လူမရှိဘူး လုပ်နေတာကို)
စီးပွားရှာလို့လဲ စီးပွားတက်လာတာမဟုတ်ပါ – – –
အားအားယားယား ရိပ်သာတွေသွား ခွထိုင်နေပြီး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်လို့ စီးပွားပြုတ်ကုန်ကြတာ မနည်းပါ။
(တရားကကျွေးတယ်ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖိန့်ဖိန့်နေကြတာ)
ပိုပြီးတာဝန်သိတတ်လာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါ – – – – –
ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့မို့ ငရဲကြီးမှာဆိုပြီး အခြောက်ခံထားရလို့ မပြောရဲကြတာပါ။
ဒီခေတ်မိန်းခလေးတွေ “၀ိပဿနာ” သမားနဲ့ “အရက်”သမား
ဘယ်သူ့ကို ကြောက်လဲလို့ . . .
အရက်သမားကို မကြောက်ဘူး၊ ၀ိပဿနာသမားကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရက်သမားက ချော့ခိုင်းရင်ရသေးတယ်။
၀ိပဿနာသမားက ဘာမှကို ခိုင်းလို့မရတော့ဘူး။
ဘာမှ မလုပ်တော့ပဲ အိမ်ဦးခန်းမှာ အခန့်သားထိုင်စားနေတော့ ကြောက်ကြမှာပေါ့လေ။)
“ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလိုပဲ ရှိတယ် . . . ကျနော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဒီလို့ပဲ. . . . ”
ရပ်ကွက် = ဒီနေ့မြန်မာပြည်ဘာသာရေး။
ချိုင်းနားက လာမလာတော့ မသိဘူး ဦးပါလေရာ..
ဆေးအစွမ်းထက်မထက် သုံးစွဲတဲ့ ဖေါက်သည်တွေ အဖြေပေးသွားပါ လိမ့်မယ်…အခုက တဖက်သတ်ဆေး
ငြော်ငြာနေတဲ့ လူတွေဘဲ နေရာပေးပြီး…ပြည်သူတွေက ဒီဆေးကိုဘဲ အကောင်ဆုံး လို့ထင်ချင်လည်း
– တခါက စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်မှာ ပေါက်ဆီရောင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို မနာလိုတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်က
ရိုးရိုးသားသား နဲ့ မယှဉ်ပြိုင်ဘဲ အဲဒီဆိုင်က ပေါက်ဆီက ကြွက်သားနဲ့ လုပ်ထားတာ…
စသည်ဖြင့် အပြင်မှာ ၀ါဒဖြန့်ပြီး သတင်းအမှားလုပ်တယ်..
ဒါကို တဖက်လူက မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး လို့ငြင်းလေ တဖက်က သူံရဲ့ မရိုးသားတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုက အောင်မြင်လေ ဖြစ်တယ်…
ဒါနဲ့ ဈေးကွက် သဘောတရားနားလည်တဲ့ ဆရာကြီးနားသွားတော့ မင်းဒါတွေကို အချိန်အကုန်ခံပြီး ပြော
မနေနဲ့.. မင်းရဲ့ ပေါက်ဆီ အရသာကိုကောင်းကောင်းထိန်းပြီးရင် ပညာတတ်သူဋ္ဌေးတွေ လက်ခံ လာရင်
သူတို့ ပြောတာ အလိုလို ကျရှုံးသွားမယ် လို့ပြောတယ်…
အခုလည်း.. နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီဆိုပေမဲ့ တကယ်ပြည့်ဝတာ မဟုတ်သေးလို့ ..သူတို့ နေရာရနေသေးတာ..
ဒီထက်ပို ပွင့်လင်းလာကြည့် ပါလား..လူတွေ ဒီကြက်သားပေါက်ဆီ တကယ်ကောင်းတယ် ဆိုတာ သိလာ
ဒါက ဒီလိုရှိတယ် Ko out of ရဲ့။ ငြိမ်းလည်း တရားစခန်းတွေဝင်ပြီး တရားထိုင်ဖူးပါတယ်။ ကိုယ်အားထုတ်သလောက်လည်း ငြိမ်းအေးမှု၊ တည်ငြိမ်မှုဆိုတာတွေကို ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး တွေဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးလာတယ်ဆိုတာ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်က အထင်မှား၊ အမြင်မှားနေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ Ko out of ပြောတဲ့
” အဲဒီအချိန်ကနေစပြီး… နောက်ဘယ်လိုအခက်အခဲ ဒုက္ခရောက်ရောက် ကျွန်တော်လည်း ဒီပျောက်နေတဲ့ သုညကိုဘဲကြည့်နေမိတော့တယ်..” ဆိုတာက အခက်အခဲ၊ ဒုက္ခရောက်ရင် အဲဒါကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာရမှာပါ။ တရားထိုင်ပြီး နည်းလမ်းရှာလို့မရပါဘူး။ စိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လောကဓံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့၊ ယောနိသော မနသိကာရ သဘောကိုသိအောင်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်း တရားသိမြင်တဲ့သူဟာ လူတွေကို အပြစ်မမြင်သလို၊ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ သတ္တန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိလေသာတရားတွေကိုပဲ အပြစ်မြင်၊ စိတ်ပျက်တာပါ။ အဲဒီကိလေသာတွေကြောင့် သံသရာတွေဆက်နေတယ်ဆိုတာကို သိမြင်ပြီး သံဝေဂရတယ်။ အဲဒီကနေပြီး ဒီကိလေသာတရားတွေကို မုန်းဥာဏ်ဝင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးသွားတာပါ။
” နောက်ဆုံးတော့ ဓါတ်သဘော၊ပရမတ်သဘော ..နောက်ဆုံး
လုံးရပ်သဏ္ဍာန်ပုံ ဟန်နိမိတ်လည်း မတွေ့ရ၊ နာမည်လည်းခေါ်လို့ မရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာမှမသိတော့ .. ”
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဘာမှမသိတော့ဘူးဆိုတာက ပညတ်အရ အမည်ခေါ်တပ်လို့မရတာကို ပြောတာထင်ပါတယ်။ လောကမှာ ပညတ်ဆိုတာကို ပယ်လို့မရပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားရှင်တောင် ပညတ်ကို လုံးဝမပယ်ပါဘူး။ ဆိုလိုတာက တရားဟောပြောတဲ့အခါ၊ စကားပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါ စသဖြင့် သတ္တ၀ါတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက် သုံးနေရပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အရိယာဖြစ်သော်လည်း ပညတ်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ မစွဲဖို့ပဲ အဓိကပါ။
Ko out of ပြောတဲ့ သုညသဘောဆိုတာကို ဆရာတော်ဘုရားက ၀ိမုတ္တိရသလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ မဂ်တုတွေဆိုတာပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တကယ် တရားရ၊ မရ ဆိုတာကို စမ်းစစ်နိုင်တဲ့တရားတော်တွေရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးကိုအလွတ်မရလို့ နောက်မှပဲ သေချာအောင်ဖတ်ပြီး ပြောပြပါမယ်။ အဲဒီ့တရားတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။( ရိုးသားဖို့တော့လိုပါတယ်။) ဒါကြောင့် ၀ိပဿနာ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ တန်ဖိုးမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ ဆိုးကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူး။ အားထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ အားထုတ်နည်း မမှန်ကန်မှုတွေကြောင့် ဆိုးကျိုးတွေဆိုတာ ဖြစ်လာရတာပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ သတ္တ၀ါအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီး လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးမှ ရရှိလာတဲ့ တရားတော်ကို အပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့ အစကနေ သေချာပြန်ပြီး အားထုတ်စေချင်ပါတယ်။ အကျိုးရှိမှာပါ။ တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာ တရားနာခြင်းဟာလည်း အင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် နာလည်းနာ၊ အားလည်းထုတ်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(၀ိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ ဆိုးကျိုးဆိုတာမရှိပါဘူး။) ဆိုပေမယ့်
ပရမတ်တွေကို ရှုနေတဲ့ ၀ိပဿနာကတော့ ဗိုင်းရပ်လိုပဲလို့
“http://myanmargazette.net/122657/atheism-agnosticism-buddhism-christianity-hinduism-islam-judaism-new-age-pagan-earth-based-religions-religious-concepts-self-help-spirituality-wicca-witchcraft-religion-spiritualit/buddhist-buddhism-asia-theravada-mahayana-zen မှာ အပီကို ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။
ဗိုင်ရပ်လိုဆိုရင်တော့ လူကို ပျက်စီးစေမှာပေါ့ဗျာ။
အော် ဒါနဲ့ စကားမစပ် . . . အခုတလော online မှာ ဗိုင်းရပ် တစ်မျိုးအကြောင်းသတိပေးနေတယ်နော်။
ယောင်လို့တောင် သွား မရှုနဲ့ . . အဲလေ . . သွားအားမထုတ်နဲ့ . . . ဟာ ရောကုန်ပြီ. . သွားမဖွင့်နဲ့နော့။
မင်္ဂလာပါ Nyein Nyein ရေ…
အလုပ်သည်ပင်လျှင်တရား တရားသည်ပင် အလုပ်ဆိုတာ လည်းကြာဖူးတယ်…
တရားဆိုတာ သီးခြား အချိန်ပေးနေဖို့ မလိုဘူးလို့ တရားဂုဏ်တော် (၆) ပါးမှာပါတော့
အခုက ဒီအငြိမ်းဓါတ်ကို မြင်ဖို့ အချိန်တွေ ပေးရတယ် နေရာပေးရတယ် ဆိုတော့ တရားဂုဏ်တော်
ဒီသုည ဟင်လင်းပြင်ကို မြင်နေရတော့ အလုပ်လုပ်ရင် ရှေ့ ကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိတော့ဘူး
ဆောင်စရာတွေ ၊ရှောင်စရာတွေ လည်းမသိတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်…
ဥပမာ ယဉ်မောင်းတဲ ပိုင်းလော့ ကာမောင်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာ ခြံပေါက်တဲ့ လုပ်သား တွေဆိုရင် ဒီအမှတ်နဲ့ သာ
အလုပ်လုပ်ကြည့် ပါလားရှောင်စရာတွေ၊ ဆောင်စရာတွေ ဘယ်သိတော့မလဲ?..
တရားဆိုတာ ကာလ၊ဒေသ၊ ပုဂ္ဂလမရွှေး မှန်ရမယ်ဆိုရင်..လက်တွေ့လောက ဘ၀မှာ အသုံးချလို့ ရရမယ်ထင်တယ်…ဒါကျွန်တော်မြင်တဲ့ အမြင်လေးပေါ့နော် Nyein Nyein ကျေးဇူးပါ…
အလုပ်သည်ပင်လျှင်တရား တရားသည်ပင်လျှင်အလုပ်ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့်မှန်ပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်း တရားရှုမှတ်ပွားများလို့ရလို့ ဒီလိုပြောကြတာပါ။ အငြိမ်းဓာတ်ကို မြင်ဖို့ အချိန်ပေးတယ်ဆိုတာက တရားရှုမှတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ ဒီအငြိမ်းဓာတ်ကို နှစ်သက်စိတ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကို ရှုမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုမသိပေမယ့် ရဟန္တာများတောင် တရားရှုမှတ်ကြပါသေးတယ်။
တရားဟာ ဧရိယာပုဒ်လေးပါးလုံးနဲ့ ကျင့်ကြံလို့ရတာပါ။ Ko out of ပြောတဲ့ သုည ဟင်းလင်းပြင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးအားထုတ်ရင် မြင်နေရတာလဲမသိဘူး။ စားရင်စားတယ်လို့မှတ်၊ သွားရင်သွားတယ်လို့မှတ်၊ လုပ်ရင်လုပ်တယ်လို့မှတ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူ၊ အနေအထိုင်ပေါ်မှာ သတိလေးကပ်ပြီး ဆင်ခြင်တာကို နေရာ၊ အချိန်မရွေး အားထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါ။
ပြီးတော့ ငြိမ်းနာကြားဖူးတာကတော့ တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ် ရတယ်ဆိုရင် ငြိမ်းအေးတဲ့ဓာတ်ကို ခံစားရတယ်။ ဖိုလ်ဝင်စားလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အဆင့်အထိရောက်မှ ဖိုလ်ဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာမသိပါဘူး။
” တရားဆိုတာ ကာလ၊ဒေသ၊ ပုဂ္ဂလမရွှေး မှန်ရမယ်ဆိုရင်..လက်တွေ့လောက ဘ၀မှာ အသုံးချလို့ ရရမယ်ထင်တယ် ” လို့ Ko out of ကပြောပါတယ်။ အထင်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ရတာပါ။
Ko out of… အနာဂျက်ဆင်ဆေးဝါး ပမာပြတဲ့ ၀ိပဿနာက ဘယ်ဝိပဿနာကို ပြောတာပါလဲ၊
“အချိုမှုန့်ပမာ ယနေ့ခေတ်ဝိပဿနာ” လို့ သုံးနှုံးထားတာကို တွေ့ရလို့ပါ။
အချိုမှုန့်အရည်အသွေးနဲ့ အနာဂျက်ဆင်လို ၀ိပဿနာလား? ? ? ? ?
အချိုမှုန့်အရည်အသွေးနဲ့ အနာဂျက်ဆင်လို ၀ိပဿနာလား? ဆိုတာ ကတော့ စကားလုံးသာ ကွဲပြားတာပါ
အချိုမှုန့်လည်း လူကို တစစီဖဲ့ချွေ သလို.. အနာဂျက်ဆင်၊နိုဗာဂျင် လိုဆေးဝါးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး
သိပ်များတော့ သိတဲ့လူက ရှောင်သလို အဓိပါယ်ခြင်း အတူတူပါ လို့ပြန်ကြား လိုက်ပါတယ်…နောက်
– ရုပ်နာမ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်၊ ရုပ်နာမ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုမုန်း၊ ရုပ်နာမ်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆုံး ဆိုတာ
တယောက်တည်းကျင့် တုံးကတော့ ဟုတ်တယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ လူတော ထဲပြန်ရောက်တော သုံး လို့မရဘူး
ဖြစ်နေတယ်… တယောက်တည်းနေပြီး လောဘ၊ဒေါသ မဖြစ်တာ ဘုရားဟော တဲဝိပဿနာ မဟုတ်ဘူး..
ရေမရှိလို့ ရေထဲမှာ မနှစ်တာဆိုတာကို ဘုရားကမဟောပါဘူး…ဒါကြောင့် သူ့တပည့်ရဟန်းတွေကို လူတောထဲ ပြန်ပြီး မင်းတို့သိတဲ့ တရားနဲ့ လူတွေချမ်းသာဖို့၊ စီပွါးကြီးပွါးဖြစ်ဖို့ ၊ လောလူသားတွေကိုစောင့်ရှောက် ဖို့ မှာကြားသွားတာဘဲ မဟုတ်လား?..ဒါကြောင့် ရေထဲမှာ နေပေမဲ့ ရေထဲမှာ မနှစ်တာ ဘယ်လောက်
လွတ်လပ်လဲ?.. လူတောထဲမှာနေပြီး လူအများတွေနဲ့ အတူတူနှစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး…ရေမရှိလို့ရေထဲ မနှစ်တာအဓိပါယ် မရှိသလိုပေါ့…
Nyiein Nyein လိုဘဲ တချိန်တုံးက ကျွန်တော်ဟာလည်း ဆရာသမားတွေဆီက အမျိုးမျိုးကြားခဲ့ ရဖူးပါတယ်
ရုပ်နာမ် ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ ဥာဏ်ပြန်ဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် ဥဒယ၀ယ ဥာဏ်ကနေ ပြန်စရတယ်…တချို့ကျတော့
အချိန်နည်းနည်းကြာတယ်..တချို့ကြတော့ တအောင့်လောက်နေရင် အဲဒီ အရှိမဲ့ အသိမဲ့ နေရာ အကာသ
သုညတ ကိုရောက်ဖို့ မြန်တယ်..
ဝေဒနာနုပဿနာ ဆိုတဲ့ ဝေဒနာကိုရှု့မှတ်ရင်း.. မြန်မြန်လာပြီး နောက်ဆုံးတော့ ဝေဒနာဆုံးပြီး
မဖြစ်မပျက်တဲ့နယ်ကို ရောက်သွားတယ်…ဒါဆို မဖြစ်မပျက်တဲ့ နယ်ကိုရောက်ဖို့ ဝေဒနာဆိုတာ ပေါ်မှ
ရမှာပေါ့…ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ ရှိမှရမှာပေါ့..နိဗာန်ဟာ အကြောင်းတရားကင်းတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လို့ ဒီဖြစ်ပျက် ကိုအကြောင်းခံရလဲ?..တကယ်တော့ ဘုရားရှု့ခိုင်းတာ ဝေဒနာခံစားချက် အဆိုးအကောင်း ဖြစ်ပျက် မဟုတ်ဘူ..ဒီခံစားချက်
ဝေဒနာဟာ ခနာရှိနေသရွှေ့ နာကျင်ကိုက်ခဲ ထုံကျင်တာရှိမှာဘဲ.. ခနာရှိ သမျှကာလပတ်လုံး ရုပ်/နာမ်
ဖြစ်ပျက်ရှိနေမှာဘဲ..ဒီဖြစ်ပျက်က ဘယ်တော့ဆုံးမလဲ? ဒါက ဘုရား ဆိုလိုတဲ့ ဒုက္ခဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူး..
အရင်က သိတဲ့ ပဋိစ္စသမုပါဒ်က အ၀ိဇာ လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပျက်၊ သင်္ခါရလည်း ဖြစ်ပြီးပျက်၊ ၀ိညဉ်လည်း
ဖြစ်ပြီးပျက်၊ နာမ်ရုပ်လည်း ဖြစ်ပြီးရင်ပျက်…စသည် စသည်ဖြစ်သိနေတာ သိဖို့သိပ်မခက်ဘူး..
အခုက အ၀ိဇာကြောင့် င်္သခါရ..သင်္ခါရကြောင့်.. ၀ိညဉ် ..နာမ်ရုပ်.. သဠာယတန စသည် စသည်
အကြောင်း အကျိုးတခုကို တခုရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ ပြီး လှည်ပတ်နေတာကိုပြောတာ..
မသိမှုအ၀ိဇာကြောင့် ..ပုည၊အပုည၊အနဇျာဘိင်္သခါရ ဖြစ် စသည့် ပဋိစ္စသမုပါဒ်ကို ပထမ အကွက်ကနေအ၀ိဇာကနေ ၀ိဇာ ဖြစ်အောင် လုပ်
– အခု ရုပ်/နာမ် ဖြစ်ပျက်ကို အခြေခံတဲ့ ဖြစ်ပျက်က ဒုတိယ အကွက်မှာ ရောက်နေတော့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူ.. ဝေဒနာ နဲ့ တဏှာကြားဖြတ်ခိုင်းတာကဝေဒနာ ခံစားချက်ကို ဖြတ်တဲ့
ပဋိစ္စသမုပါဒ် တရားပါ…ဝေဒနာ မဖြစ်အောင်တားလို့ရတယ်..အခုခေတ်မှာ ထုံဆေးတွေပေါပါ့..ထုံဆေး
ထိုးပြီး ထိုင်ရင် ဒီဝေဒနာ ဆိုတာ ဘယ်ပေါ်တော့မလဲ?… ဒါလှောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးတကယ် ဖြစ်နေတဲ့
သစ္စာလေးချက် တပြိုက်နက်ပြီးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တဲ့ဥာဏ် ၀ိဇာ ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ ကျန်တဲ့ သင်္ခါရတွေ..
၀ိညဉ်တွေ ဆက်ဖြစ်ခွင့် မရတော့ဘူး..
အခုက အ၀ိဇာ၊သင်္ခါရ ကို အရင်ဘ၀က အတိတ်ကို လုပ်ထားတော့ ရပ်လို့မရတဲ့ ပဋိစ္စသမုပါဒ်ဖြစ်
– နောက် ရဟန္တာများ ဟာလည်းတရားရှုမှတ်နေရတယ်ဆိုတာ စဉ်းစာဖို့တော့လိုမယ် ထင်တယ်..
နောက်ဆုံး တောင်ထိပ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပြီးတဲ့လူဟာ တောင်တက်ဖို့ အလုပ်ပြန်လုပ်ရတယ်
ရဟန္တာဆို တာ သင်ခန်းစာ ပြီးဆုံးသူ၊ မမှားတော့တဲ့လူ ကိုပြောတာ လို့ဘဲ နားလည်ပါတယ်…
သင်ခန်းစာကို ကြေညက်အောင် လေ့လာပြီးသူ လို့ပြောလည်းရတယ်..ဒါဆို ကိုသိပြီးတတ်ပြီး သင်စာ
ကို ပြန်ကြည့်ရတယ် လို့ များဖြစ်နေမလားပေါ့?…
– နိဗာန်ဆိုတာ အဆိုက်ရောက်ခံပါ …နိဗာကိုရောက်ချင်သူဟာ နိဗာန်ကို သိပ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာစရာ မလိုပါ
ဘူး.. ဒုက္ခကိုသာသိအောင်လုပ်ရမယ်..မီးခဲ ပူတယ်လို့ သိလိုက်တာနဲ့ အပူဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခလည်း လွတ်မြောက်
နောက်…တရားဆိုတာ ထိုင်ဖန်များတော့ ထုံကျင်ကိုက်ခဲ တာကို သီးခံရှုမှတ်ရင် ခနာကိုယ်မှာ ဓါတ်တခု
နာကျင်မှု မရှိတော့တာ အဲလိုများ ဖြစ်နေမလားပေါ့…
– ငြိမ်းငြိမ်းစဉ်စား လို့ရအောင်..
ဥပမာ ထမင်းစားရင် စားတယ် စားတယ် လို့အမှတ်နဲ့စားတယ်ဆိုပါတော့..
အဲဒီအမှတ်ကို ပစ္စု ပန်တဲ့အောင် သတိထားရင်းနဲ့ ကိုယ်ဘာစားမှန်းလည်းမသိ၊ အရသာလည်းမသိ
ဘာမှ မသိဖြစ်သွားတယ်..ဘာမှ မသိတော့ ငါစားတဲ့ ဟင်းဟာ ဆီများတယ်.. ငါ့သွေးတိုးနဲ့ မတည့်
ဘူး..ရှောင်ရမယ်..ရှောင်စရာ(၀ါရိတ္တသီလ)၊ဒီဟင်းဟာ ငါ့အခနာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အဟာရဖြစ်နေတယ် ဒါငါနည်းနည်းစားမှ ရတယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်စရာ (စာရိတ္တသီလ) .. ဒါသီလဘဲ.. ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်ရင်း
နဲ့ ဒီသီလကို ဆင်ခြင်လို့ ရတယ်…ဘုန်းကြီးချပေး လို့ အခုထိ ယူရတဲ့ သီလမျိုး မဟုတ်ဘူး…လိုရင်းပြန်
လျှာဆိုတာ သဘာဝက အရသာသိဖို့ ပသာဒအကြည်ဓါတ်ဆိုတာရှိတယ်..သဘာဝက ပေးပါရက်နဲ့ စားတယ်စားတယ် ၀ါးတယ်ဝါးတယ် လို့ဆိုရင် အရသာ အာနိသင် မသိတော့ဘဲ သဘာဝကို ဆန့်ကျင် သလို မဖြစ်နေဘူးလား? စာလည်းရှည်သွားပြီ..နောက်မှ ပြန်ဆွေးနွေးမယ်နော.. ကျေးဇူး…
ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို။ ငြိမ်းလည်း အခုမှကျင့်တုန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ဆရာတော်များလို သေချာမရှင်းပြနိုင်သေးပါဘူး။ ပြီးတော့ စာရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ တစ်ချို့ စာလုံးတွေကို သေချာမရိုက်တတ်တာလည်းပါပါတယ်။ အစ်ကိုရေးထားတာကြည့်ရတာတော့ အစ်ကိုလည်း စာဖတ်တဲ့ပုံပါပဲ။ စာဖတ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ တကယ်ဝိပဿနာ အားထုတ်တဲ့ ဆရာတော်များကိုလည်း မေးလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားတော်များကို ပိုပြီးနာကြားတာပဲလုပ်ကြည့်ပါလို့ပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ငြိမ်းလည်း ဆက်လေ့လာပြီး သိတဲ့အခါမှာ ထပ်ပြီးဆွေးနွေးပါဦးမယ်။
ကျုပ်တော့.. ၀ိပဿနာအကြောင်း.. ပီနန်ဆရာတော်ကြီးမေးလျှောက်ပြီးကထဲက..ပြတ်ပြတ်သားသား.. စွန့်လိုက်တယ်..
ယောဂကျင့်တာဟာ.. လူအတွက်.. တချို့အခြေအနေ..အချိန်အခါမှာ… အကျိုးရှိတယ်လို့.. ထင်လို့ပါ..
သူကြီးက ဘာမေးပြီး ဆရာတော်ကြီးက ဘာဖြေလိုက်လို့ ပြတ်ပြတ်သားသားတောင်စွန့်လိုက်ရတာလဲဟင်။ စပ်စုတယ်တော့မထင်ပါနဲ့ စပ်စုတာပါပဲ။
(((၀ိပဿနာအကြောင်း.. ပီနန်ဆရာတော်ကြီးမေးလျှောက်ပြီးကထဲက..ပြတ်ပြတ်သားသား.. စွန့်လိုက်တယ်..)))
သူကြီးလိုလူက စွန့်လိုက်တယ်ဆိုရင် အဲဒါ တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ့်
အဲဒါကျတော့ ဘာလို့ တိတ်တိတ်လေးသိမ်းထားတာလဲဟင်…
သူများတွေ အကျိုးများအောင် ချရေးပြပါလား.. လို့..
ပွဲတောင်းအောင် စောင့်တာဆိုရင် အခု ပွဲတောင်းပါတယ်ဗျို့….
ပွဲတောင်းလဲ မပြောဘူးဆိုရင်တော့ မီးဒုတ်ပါဗျို့…..
၂၀၀၇ သြဂုတ်လထုတ်.. သတင်းစာအတွက်.. ဆရာတော်ကြီးအယ်လ်အေရောက်တုံး.. အင်တာဗျုးခဲ့တယ်..
အင်တာဗျုးရင်းနဲ့..( ထုံးစံအတိုင်း..) မသိတာတွေ ချည်းကပ်မေးတာပေါ့..
အင်တာဗျုးထဲ.. ၀ိပဿနာနဲ့ပါတ်သက်တာတွေ.. လူမုန်းများနိုင်တာမို့.. သိပ်မထည့်လိုက်ဖူးလို့မှတ်မိတယ်..
မြန်မာပြည်က..ဆရာတော်ကြီးတွေလည်း.. အဲလိုများဖြစ်နေကြသလားတော့.. မသိ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ပုံနှိပ်ထားတာလေး… ပြန်ရှာတင်ပေးပါ့မယ်..။
It seem you never learned form the real teacher.
You will feel afraid and loss when you feel everything zero. this is because of you working vipassathana with “Datehti”. you must taking off your Datehti when you do vipasathana.
What you happen was already happen in Shin Sanda monk ( Myinn mee Swel Mg San ) just before Buddha’s pradevandaa. Later he approchased the real teacher and was showned the right way and he became yahanda.
Don’t blame the vipassthana. but blame yourself because of you learning way on wrong method or wrong teacher
That why, buddha told over 1570 time to find real teacher in his 45 years of teaching period.
“Ko Pyu Tha Mya Kan Koh Htan Pyan.”
You may be sincerely posting this post with sincerely showing your experience or May Be You Are intend to distroy buddhism is only you may know. If you sincerely showing your bad experiance about vipassthana you should approched to real teacher. But if you intend to distroy buddhism you will be go to HELL.
မာလုကျပုတ်တ သုတ် ကို သတိရမိတယ်(ရွှေပြည်သာဆရာတော် ရဲ့ စာအုပ်သေးလေးထဲက ပါ)
ဘုရားက မာလုကျ ကို ဟောတယ်
သင် ယခင်က မမြင်ဘူးသော. ယခု မမြင်ဘူးသော. မြင်ဆဲ မဟုတ်သော
အဆင်း အပေါ်မှာ လောဘ.ဒေါသ ဖြစ်မလား
ဘုရားက အဲဒီလိုပဲ အဆင်းတစ်ခုခု ကို မြင်ရင် လောဘ.ဒေါသ မဖြစ်ဖို့ ကျင့်၇မယ်
အဆင်း .အသံ. အနံ .အရသာ. အထိအတွေ့ .အာရုံ တွေမှာ လောဘ.ဒေါသ မဖြစ်အောင် နေပါ
လို့ပဲ တရားကျင့်နည်း ပေးတာ
ဒီနည်းက ဘာလို့ မှေးမှိန် နေပြီး
အနာဂျက်ဆင် တွေဘဲ လူတွေ သိနေကြတာလဲ ……
ဘုရားက မာလုကျလုလင်ကိုဟောတဲ့ မာလုကျပုတ္တသုတ်ဟာ စိတ္တာဝိပဿနာ သတိပဌာန် နည်းဖြစ်ပြီး-
၀ိပဿနာ သတိပဌာန် ကျင့်နည်း ပွားနည်း အားလုံးလိုလိုထဲမှာ တစိတ်တပိုင်းပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။
စိတ္တာဝိပဿနာ သတိပဌာန်ကို အားပြုတဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ သင်ကြား ဟောပြပေးနေကျလဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းကတောင် နာမည်တမျိုးနဲ့ အဲဒီနည်းလမ်းကျင့်စဉ်သတ်သတ်ကို သူလဲကျင့် သူများကိုလဲ သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးကတော့ အရင်ကလဲ အခြား သမထ၊၀ိပဿနာ အလုပ်များမှာ အလေ့အကျင့်များ ၊အင်မတန်လဲ သမာဓိကောင်းသူမို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျင့်လို့ရပုံရပေမယ့် အခြားလူများအတွက်တော့ သိပ်ထိရောက်ပုံမရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်ကို အလေ့အကျင့် အထောက်အပံ့မရှိပဲ ထိန်းချုပ်ဘို့ဟာ မလွယ်ကူလှ လို့ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း အာရုံတခုခုအပေါ်မှာ လောဘ ဒေါသ မောဟ မဖြစ်အောင်ဆိုတာ…
မင်္ဂလာပါ ဦးပါလေး …
အရမ်းခက်တဲ့ကိစ္စပါ….ဆိုတာ ကို ပြန်ဖြေပေးကြည့် ပါ့မယ်..
– ဒီလိုဗျာ.. ကိုယ့်ရဲ့ ညီမတွေ နှမတွေ ဆိုပါတော့ သူတို့ တတွေလည်းမိန်းမဘဲ သူတို့က
ကိုယ်ရဲ့နှမ ညီမမို့ မကြိုက်တာလား? မဟုတ်ပါဘူး.. အာရုံမရှိလောက်အောင် ကိုယ့်နှမ ညီမ
တွေဟာ သိပ် အရုပ်ဆိုးနေလား မဟုတ်ပါဘူး ..ဒါဘာကြောင့် မကြိုက်တာလဲ?..
ဒါဟာ ငယ်ငယ် ကတည်းက အမှတ်သညာ လေးတခုကြောင့်ပါ..
မယုံရင် ငယ်ငယ် ကတတည်းက ခွဲခွါကြတဲ့ မောင်နှမ ဆိုပါတော့…
သူတို့တတွေ မောင်နှမ မှန်းလည်းမသိကြဘူး ဆိုပါတော့ ဒါဆို သူလည်း
အေး..ဒါပေမဲ့.. သူ့ဦးလေး အဒေါ်က အဲဒါ မင်းညီမ ငယ်ငယ်က ခွဲခွါခဲ့ ရလို မင်းမသိတာ
လို့ပြောလိုက်ရင် သူကြိုက်နိုင်ပါ့မလား? အမှတ်သညာဆိုတဲ့… အဲဒါမင်းညီမကွ
လိုထဲ့ ပေးလိုက်တာနဲ့ အာရုံလာသေးလား?..
ဒါကြောင့် အရမ်းခက်တယ်၊ မလွယ်ဘူး လို့ ဦးပါလေးရာပြောတာ …ကျွန်တော်မြင်တာ
ဒါ သ်ိပ်အခက်ကြီး မဟုတ်ဘူးဗျာ…လူတွေက ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်ပြောနေတာ..
ဘုရားကတော့ အနုယောဂ ထပ်ခါထပ်ခါ မလုပ်ဖို့ပြောတာ…
ဒါကြောင့်.. သညာဆိုတဲ့ အမှတ်မှားလေး တခုကြောင့်ပါ လို့ ပြောပါရစေ…
(၁) “Ko yu Tha Mya Kan Koh Htan Pyan.”
ဥပမာ ဘောလုံးတစ်လုံးကို နာရံမှာ ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်လိုက်မယ် ဆိုပါတော့ အဲဒီ ဘောလုံးရဲ့ တန်ပြန်မှုဟာ
အခု ချက်ချင်းလား?…တအောင့်လောက်နေပြီးမှ ပြန်တုံ့ပြန်လား?..
သို့မဟုတ် နောက်ဘ၀ ကျမှ ဒုံး ဆိုပြီး တုံ့ပြန်လား?…
ကိုယ်စိုက်လိုက်တဲ့ အပင် မျိုးစေ့ အမျိုးအစား ပေါ်မူတည်ပြီး ၂/၃ ရက် ၂/၃ လ စသည်ဖြင့် ပေါက်ရ
ပါမယ်.. အခုဘ၀ မှာ အပင်မပေါက်ဘဲ နောက်ဘ၀မှ ပေါက်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူက ဘာနဲ့ သက်သေပြ
အဲဒီလို နောက်ဘ၀မှ ပေါက်တဲ့ မျို့စေ့ ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့လူရဲ့ စကားကို ယုံဖို့ဆိုတာ အဓိပါယ်
အမြုံမက မွေးတဲ့ ကလေးဆိုတာရှိလား ဆိုတဲ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ မရှိသလိုပါဘဲ.. နောက်ဘ၀မှ အပင်ပေါက်
တာကို ယူတဲ့လူဟာ အဖြေမှန် မရှိနိုင်ပါဘူး…
ဒါကြောင့် ဘုရားဟာ သေပြီး ဖြစ်သလား မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေတာ
မြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့ လက်တွေနယ်ရဲ့ တဖက်မှာ ဖြစ်နေလို့ သူဖြေရှင်းရမယ့် တရားခွင်
မဟုတ်လို့ဘဲ…အခုလည်း ကိုယ်ပြု သမျှကံ ကိုယ့် ထံပြန်ဆိုတာ လည်း နောက်ဘ၀မဟုတ် သလို…
ကိုယ်ကသူ့ ပစ္စည်း ခိုးလိုက်လို့ သူ့ပစ္စည်းရှုံးတာလည်း ကိုယ့်ထံပြန်တာ မဟုတ်ဘူး..
ကိုယ်က သူ့ပစ္စည်း ခိုးလို့ ခိုးသူဖြစ်သွားတာ..အဲဒီခိုးသူ ဖြစ်ပြီး ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြန်းခိုးချင်တာ ကိုယ့်ပြု
သမျှကံ ကိုယ့်ထံပြန်လို့ပြောရပါတယ်..တနည်း တူသော အကျိုးပေးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်..
(၂) Don’t blame the vipassthana. but blame yourself …ဆိုတာလည်း
– ၀ိပဿနာ ဆိုတာ သဘာဝခနာရဲ့ အမြဲမပြတ်ဖြစ်ပျက် နေတဲ့ရုပ်နာမ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မလား?
– ကိုယ်ပေါ်လည်ပတ်နေတဲ့ အစွဲ ခနာကြောင့် ပျက်စီး၊ဆိုးဝါး၊ အသုံးမကျ၊ မလှမပ တဲ့ လက္ခဏာကို ကြည့်
မလား?.. ကိုယ့်ရဲ့ ဒီအစွဲကြောင့် လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါ တရားလား မတရားလား ဆိုတာကို
ပညာရပ် တခုသင်ယူတယ် ဆိုတာ ဘ၀မှ အသုံးချဖို့ပါ..အခု သိထားတဲ့ ၀ိပဿနာ ပညာရပ်ကိုလည်း
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပေါ်မှာ တင်ကြည့်ရပါမယ်.. သရုပ်ဆောင်ခိုင်းကြည့်ရပါမယ်… သရုပ်ဆောင်ခိုင်း
ကိုးယိုးကားယားဖြစ်နေရင် အဲဒီပညာရပ်ဟာ အသုံးမ၀င်ပါဘူး…သူမရှိ ငါမရှိ ပုဂိုလ်မရှိ သတ္တ၀ါမရှိ
မိန်းမ မရှိ ယောင်္ကျား မရှိတွေဟာ လက်တွေ့ လူ့လောက ဘ၀မှာလူကို… ကိုးယိုး ကားယား ဖြစ်စေတဲ့
အရာတွေပေါ့…အဲဒီလို ကိုးယိုး ကားယား ဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်မှန် ကိုနောက်မှ တင်ပြပေးမယ်..
ဝိပဿနာ ဆိုတာကို သဘော တိတိ ကျကျ သိပါပြီလား..
ဝိပဿနာ၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို တိတိကျကျ သိပါပြီလား..
ဝိပဿနာ ရှုမှတ်ရန်အတွက် ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံ ရပြီလား..
ကိုယ့်မှာ ပြည့်စုံတဲ့ သမထ သမာဓိ အခြေခံ ရှိပြီလား..
ကိုယ်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ကမ္မဌာန်း က ဘယ်လောက် အကျိုးပြု ပါသလဲ..
ကိုယ်ကျင့်ခဲ့သော ကမ္မဌာန်းသည် ကိုယ်နှင့် ကိုက်ညီသော ကမ္မဌာန်းဖြစ်သည်ဟု
မည်သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်က သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသနည်း…
မိမိကိုယ်တိုင်ကော ဝေဖန် သုံးသပ်မှု ပြုခဲ့ပါသလား…
ဤသို့ ဝေဖန် သုံးသပ်နိုင်ရန် မည်သည့် တရားဒေသနာ များကို လေ့ လာဆည်းပူးခဲ့ပါသနည်း..
ဗုဒ္ဓ၏ သုတ္တံ ဝိနည်း အဘိဓမ္မာ တရားများကို ကောင်းစွာ လေ့လာဆည်းပူး ပြီးပါ သလား..
ကောင်းစွာ လေ့လာဆည်းပူးပြီးအပ်သော ဆရာကောင်းရှိပါသလား..
ထိုဆရာတို့၏ ညွှန်ကြားပြသမှုကို ကောင်းစွာ လေးစားလိုက်နာ လေ့ကျက်မှု ပြုပါပြီလား..
ထိုသို့ အခြေခံ ကျစွာ လေ့ကျင့် လိုက်နာ ခဲ့ပါက လွဲချော်သော လမ်းမှားကို မရောက်နိုင်..
ဗုဒ္ဓ၏ တရားသည် ဖြတ်လမ်းမှ လိုက်၍၎င်း ။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား လို၍၎င်း ။
တတ်မက်မှု လောဘ ကို အခြေခံ၍၎င်း ။ အစွန်းနှစ်ဘက်မှ မလွတ်မူ အမှန်ကို မတွေ့နိုင်..။
ဗုဒ္ဓ၏ ဝိပဿနာ တရားသည်ကား ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခလွတ်ကင်းရာ နိဗ္ဗာန် ကိုသာ ပေးပါ၏ ။
ချမ်းသာကို မပေးပါ ။ အထူးသဖြင့် လောကီချမ်းသာကို မပေးပါ ။
မှတ်ချက် ။ ။ နိဗ္ဗာန် သည် ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါ။
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟု စွဲယူက ချမ်းသာမှုလောဘ စွဲမှုကြောင့် အမှန် မတွေ့နိုင် ။
ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေထဲမှာကို ဒီ “၀ိပဿနာ”ဆိုတဲ့ အသုံးကိုက မပါဘူးလို့ ပြောကြတဲ့ ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်။
ဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးဟာ နောက်ပိုင်း အဌကထာဆရာတွေ ထွင်ထားတဲ့ စကာလုံးပါ။
တကယ်ကတော့ ဗုဒ္ဓ ၄၅- ၀ါ ဟောခဲ့တဲ့ တရားတွေဟာ သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုရတဲ့ လူတွေ သိသင့် သိထိုက်တာတွေကို အမှန်သိဖို့ပါပဲ။
ဘယ်တရားတွေဟာ သိသင့်တာလဲ ?
ဘယ်တရားတွေဟာ သိထိုက်တာလဲ ?
ဆိုတာကတော့ ဒီနေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးလောကမှာ တရားမမှုလိုမျိုး အငြင်းပွားနေကြရပါတယ်။
တချို့ကတော့ နာမ်၊ ရုပ်တွေကို အမှန်အတိုင်းသိရမယ်တဲ့၊
တချို့ကတော့ လွန်ကျူးမှု ကံ (သင်္ခါရ) တွေကို အမှန်အတိုင်းသိရမယ်တဲ့၊
ကဲ မိတ်ဆွေ . . .
ဘယ်ဟာကို အမှန်အတိုင်းသိတာဟာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးတည့်တယ်ဆိုတာကို
သူများမင်္ဂလာတော့ ကိုယ်လည်း မင်္ဂလာရတာပေါ့
ဆရာတော်တစ်ပါးမိန့်ကြားတာမှတ်သားဘူးပါတယ် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမဖြစ်စေလို၍ ဘွဲတော်မပြောတော့ပြီ
ပရိယတ် နဲ့ ပတိပတ် နှစ်ဖွဲ့ သူ့ကိုငါပြော ငါ့ကိုသူပြော တာတွေရှိကြပါသတဲ့ ကိုယ်လိုက်မပြောမိဘို့
မှတ်ချက်။ ။ ကျွန်ုပ်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ ဖေါက်သည်ချခြင်းသာလျှင်။
ပတိပတ် ကျင့်နေသူတွေက ပတိယတ်ကျင့်နေသူတွေကို
အလကားပါကွာ နွားကျောင်းသားတွေ နွားဘဲကျောင်းနေတာ နွားနို့ မသောက်ဖူးပါဘူး ဒဲ့
အဲ့သည်အခါ ပရိယတ်သမားတွေကလည်း ပတိပတ်ကျင့်နေသူတွေကို ပြန်ပြောပါသတဲ့
အလကားပါကွာ ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေဒါဘာ ဒဲ့
ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် အချင်းချင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ဘာသာရေးသမားတွေ အချင်းချင်း လည်း
ဟိနူကလည်း မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ buddha က ငါတို့ ဘုရားဝင်စားတာကွ လို့ပြော..
ဗုဒ္ဒကိုးကွယ်တဲ့ လူကျပြန်တော့လည်း ယေရှုခရစ်ပျောက်တဲ့ အချိန်က တိဘက်မှာ ဗုဒ္ဒတပည့်
နားပညာ သွားသင်တာ..သူဟာ ဗုဒ္ဒတပည့်ဘဲတဲ့ …. မူစလင်ကလည်း မင်းတို့ ခရစ်ယာန်
ဘုရားငါတို့ရဲ့ .??? မမှတ်မိတော့လို့ စသည်စသည်ဖြင့်ပေါ့…
သူတို့ အချင်းချင်း လည်းတိုက်ခိုက်နေကြတာ ဘဲ..
ကျွန်တော်က ဘာသာရေးကိုလေ့လာပေမဲ့ ဘာသာရေးသမား.မဟုတ်ဘူး..ဘာသာရေးရဲ့ ကျေး
ကျွန်မဟုတ်ဘူး.. ဘ၀မှာ အသုံးချဖို့ လေ့လာတာ..ဒါကြောင့် ရန်ဖြစ်တဲ့ အထဲမှာ ကျွန်တော်မပါဘူး..
မိုက်ကယ်ဂျော်နီပုအောင် ကိုဖြေကြားပေးတာ မကုန်သေးလို့ နည်းနည်း ထပ်ဖြည့်မယ်နော..
ရန်ဖြစ်တာ ပြောရဦးမယ်… ကာမဘုံ၊ရူပဘုံ၊ အရူပဘုံ ဆိုတဲ့ဘုံ သုံးပါးမှာ… သူတို့ အချင်းချင်း လည်း ရန်ဖြစ်သေးတယ်…
ဘယ်လိုလည်း ဆိုတော့.. အာရုံ တခုတည်းကို ပွါးများ အားထုတ်တဲ့ ရူပသမားတွေဟာ
သူတို့ တရားကို အာရုံတခုတည်းမှာ တင်ထားရင်းနဲ့ အထွေထွေသော ကာမ အာရုံ အရှိတရား တွေက နှိပ်စက်လို့ မရတော့ဘူး မဟုတ်လား.. ဒါကြောင့် သူတို့က ကာမသမားကို မလွတ်မြောက်သူတွေ ငါတို့လို အသိမဲ့တဲ့ နေရာတခုကို ကြည့်နိုင်တဲ့ လူက
မှ ပိုမြတ်တာ လို့ပြောတယ်..
– နောက်ရူပ သမားကို ကျပြန်တော့ အရူပ သမားက ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ သူတို့က အာရုံ တခု
ဖြစ်တဲ့ သိစိတ်ကလေးရှိသေးတယ်..ဒီရှိနေရတာ ပင်ပန်းတယ်..ငါတို့လို အရှိမဲ့တဲ့နေရာကို ရောက်တာ ကမှ ပိုအေးချမ်းတယ် လို့ ပြောပြန်တယ်..
ဘုရားကတော့ ဒီဘုံသုံးပါကလွတ်မြောက်တဲ့ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင် အလယ်လမ်းကို မြင်သူ ဆိုခါကျတော့ ဘယ်သူကို မှ ရန်မဖြစ်တော့ပါဘူး…
WBCs=white blood corpuscles ပါ ကိုအောက်အော့ဖ်ရေ။
အခုလိုထောက်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ..သားဦး၊မြေဦးရေ…
ကျွန်တော် လေ့လာသင့် သလောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်… အများကြီးတော့ မလေ့လာခဲ့ရပါဘူး..
သမုဒ္ဒရာပင်လယ်ရေရဲ့ အရသာကို သိချင်ရင် အားလုံးအဲဒီရေကို သောက်စရာ မလိုပါဘူး…
နည်းနည်းလေးစမ်း သောက်ကြည့်ရင်လည်း အရသာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်း လို့ရပါပြီ…
ချော်လှဲမှု ကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချော်လဲ ဖူးမှ ချော်လှဲမှု ကနေလွတ်မြောက်
တာ မဟုတ်ပါဘူး…ချော်လှဲ တဲ့ လူတွေကိုကြည့် ပြီး သင်ခန်းစာ ယူတတ်ရင်လည်း ချော်လှဲမှု ကလွတ်
– လောကီ လူသားဖြစ်ပေမဲ့ လောဘ၊ဒေါသ ကနေလွတ်အောင်နေနိုင်တဲ့ လူကို လောက ဥတ္တရ လောက ကနေလွတ်မြောက်သူလို့ပြောလို့ ရပါတယ်…တနည်း လူတောထဲ မှာနေပေမဲ့ အစွဲကလွတ်သူကို လောကုတ်နဲ့ နေသူလို့ပြောတယ် လို့သဘောပေါက်ပါတယ်..ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ ဘုရားလက်ထက်က လူပုဂိုလ်တွေ အိုးအိမ်ထောင်တွေရှိ ပြီး လောဘဒေါသနဲ့ မနေကြလို့ သူတို့ကို
လွတ်မြောက်ငြိမ်း ချမ်းသူလို့ ဆိုရပါတယ်.. ဘုန်းကြီးရဟန်းဝတ်ပြီး လောကီအလုပ်ကို စွန့်လွတ်မှ လောကုတ္တရာ မဟုတ်ပါဘူး..
– နိဗ္ဗာန်ဟာ ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်…ဘာမှ မရှိခြင်းလား?..ဆင်းရဲ့ခြင်းလား?…
အစွဲဟာ ရောဂါနဲ့ တူရင် ..အစွဲလွတ်တာဟာ ရောဂါပျောက်တာနဲ့ တူပါတယ်..
လူမှာရောဂါရှိရင်.. ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တယ်.. ရောဂါမရှိတော့ရင်.. ချမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်..
ထို့အတူ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်း အစွဲ မရှိတော့ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာတယ်လို့ပြောရပါတယ်..
ယားနာ ရောဂါဟာ လူကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ယားနာ ရောဂါပျောက်ရင် လူမပျောက်ပါဘူး…
ရောဂါပျောက်ပြီး လူမပျောက်မှ တန်ဖိုးရှိတာပါ..ရောဂါလည်းပျောက် လူလည်းပျောက်ဆိုရင် ဘာမှ တန်ဖိုး
တခုလေးတော့ ပြောချင်ပါတယ်…လူတွေဟာ ချမ်းသာတယ် လို့ပြောရင် ခံစားချက် ချမ်းသာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ
ချမ်းသာ လို့ချက်ခြင်းမြင်တယ်..အမှန်တော့ နိဗ္ဗာန်ဟာ အဲလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး.. လွတ်မြောက်တယ်၊ ငြိမ်း
ချမ်းတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အစိုးရတယ် လို့လည်းပြောလို့လည်းရတယ်..
ဒါကြောင့်… နိဗ္ဗာန်ဟာ ခံစားချက်နဲ့သိလို့မရပါဘူး..ပညာနဲ့မှ သိလို့ရပါတယ်…
– နောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ အဆိုက်ရောက်ခံ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သိပ်ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာနေဖို့ မဟုတ်ပါဘူး..
တနည်း နောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရန်သူလက်ကနေ လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုပါတော့..
ဒါဆို ရန်သူ အစစ်အမှန်ဘဲ လို့သိလိုက်တာနဲ့ ဒီရန်သူကို လုံးဝမပေါင်းတော့ ပါဘူး..
ဒါကြောင့် ရန်သူ အစစ်ဟုတ်မဟုတ် ကိုသာ ခွဲခြမ်းစိတ်မှု သေချာလုပ်ပါ..
ဒုက္ခကလည်း.အမျိုးမျိုးရှိတယ်..ခံစားချက်ဒုက္ခ၊ သဘာဝဖြစ်ပျက်ဒုက္ခ၊ ၀ိပရိဏာမဒုက္ခ၊
သင်္ခါရဒုက္ခ.စသည်စသည်ပေါ့.. သစ္စာထိုက်တဲ့ ဒုက္ခ မဟုတ်ရင်..တရားမသိနိုင်ပါဘူး..
အကိုအောက်အော့ဖ်၏ တရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွေးလေးတွေ